Plantronics Calisto 7200 Bluetooth Speakerphone ~ ICT.com.mm
HomePlantronics Calisto 7200 Bluetooth Speakerphone
Connects to PC via USB; mobile phone via Bluetooth Ideal for PC and Bluetooth mobile users on-the-go to transform any workspace intoasmall group conference room for up to6people... [Learn more]
Brand: PlantronicsFilter by: Conference Microphones, USD, Vortech
The small form factor still offersapremium conference experience. Four directional MEMS microphones provide 360 ​​° room coverage.
It connects easily via USB and Bluetooth.
Conference call setup is easy with USB plug-and-play.
Locking mechanism keeps device stationary in small team meeting rooms.
Bluetooth cleaning function removes previously paired devices.
Plantronics Calisto 7200 Bluetooth Speakerphone က Conference ပြုလုပ်ချိန်မှာ ပရီမီယမ်အသံအရည်အသွေးဖြင့် အသုံးပြုနိုင်မဲ့ လုပ်ငန်းသုံး Speakerphone ဖြစ်ပါတယ်။ လူလေးဦးမှ ခြောက်ဦးအထိ ပါဝင်တဲ့ Conference အခန်းငယ်တွေအတွက် အထူးဒီဇိုင်းထုတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ 360 ဒီဂရီပတ်လည်က အသံတွေကို ဖမ်းယူနိုင်ပြီး Echo Cancellation နည်းပညာကြောင့် မလိုလားအပ်တဲ့ Echo သံတွေမပါဘဲ ပါဝင်သူတိုင်းရဲ့ အသံကိုသာ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ကြားရစေမှာပါ။ USB နဲ့ ကွန်ပြူတာကို ချိတ်ဆက်ရမှာဖြစ်ပြီး Bluetooth လည်းပါဝင်တဲ့အတွက် မိမိရဲ့ စမတ်ဖုန်းနဲ့လည်း အလွယ်တကူချိတ်ဆက် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ Bluetooth ဖြင့်ချိတ်ဆက်အသုံးပြုထားတဲ့ Devices တွေကို အလွယ်တကူရှင်းပေးနိုင်တဲ့ Bluetooth Cleaning Function လည်း ပါဝင်ပါတယ်။ အသံပိတ်ခြင်း၊ အသံအတိုး/အချဲ့ ပြုလုပ်ခြင်းနဲ့၊ ခေါ်ဆိုမှုရပ်တန့်ခြင်းတို့အတွက် Touch ခလုတ်တွေကို Speakerphone ပေါ်မှာ ထည့်သွင်း ပေးထားတာကြောင့် အသုံးပြုရလွယ်ကူတဲ့ Speakerphone လေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။